Ijezi-Entsha Yezopolitiko | Eyomqungu 2022
Ngo-1943 Isigwebo seNkundla sinikeza ulwazi malunga neengxabano zesizwe
Udidi Ijezi-Entsha Yezopolitiko 2022
Abalandeli abaninzi beNFL abayikhathalelanga imingcelele yesizwe, kodwa uMgaqo-siseko wase-US ukhusela amalungelo abaqhankqalazi.
Iimpawu zobunkokeli zikaLincoln
Qwalasela ezinye zeempawu zobunkokeli ezenze u-Abraham Lincoln waba ngomnye wabongameli abaphambili kwimbali yaseMelika
I-NJ Yezopolitiko Digest: Igunya lase-Port-Commish ngoku lithi amaPolisa kufuneka asebenze 'ngethoni'
UCaren Turner, owayesakuba ngumkomishinala weZibuko owarhoxa kule veki iphelileyo emva kokufaka isibhengezo sebheji kunye namapolisa, wayefuna ukuba amapolisa e-Tenafly asebenze 'ngetoni' yabo.
Ngaba ukungxamela ukugweba uMkhomishinala weGunya laseZibuko lase-Port Caren Turner akunabulungisa?
Ngaba kufanelekile ukupeyinta uCaren Turner ngebhrashi kaDavid Samson esekwe kwividiyo yokutshintshiselana kwakhe nepolisa le-Tenafly?
'Ixesha lezinye iingxaki zendlela eFort Lee,' ubhala uChristie umphathi omkhulu, ngokwamaxwebhu
Ilungu labasebenzi abaphezulu bakaChris Christie baxelele igosa elalisakuba liPort Authority nge-imeyile ukuba 'lixesha lezinye iingxaki zendlela eFort Lee ngo-Agasti kwiiveki nje ezimbalwa phambi kokuvalwa komgaqo onempikiswano, ngokwamaxwebhu.
Imbali ethile yeHolland Tunnel
IHolland Tunnel ibingasoloko iqhutywa liGunya lasePort laseNew York naseNew Jersey. I-Holland Tunnel, eyayibizwa ngokuba yi-'Hudson River Vehicular Tunnel 'okanye iTanal Street Tunnel, yavulwa ngo-1927.
UChristie ukubamba iNkomfa ngoNondaba namhlanje
Phakathi kweefowuni ezivela kubo bobabini abaDemokhrasi kunye namaRiphabhlikhi ukuba behle esikhundleni, iRhuluneli uChris Christie uzakubamba inkomfa noonondaba kwiNdlu yeNdlu yase-NJ ngentsimbi yokuqala.
Umthetho osayilwayo weLampitt uza kujongana nemicimbi yeentlawulo zekhefu lokugula ezingasetyenziswanga
U-TRENTON-U-Gov. uChris Christie ebetyhola ii-Democrats kwezi veki zisandula- phakathi kwezinye izinto- urhuqa iinyawo ukwamkela umthetho wohlengahlengiso lwekhefu lokugula oza kuphelisa ukuphuma kwemali enkulu kwabo bathabathe umhlala-phantsi.
Umceli mngeni omtsha wokungena kukhuphiswano lwePerth Amboy uSodolophu
UMiguel Nunez ngumhlali wasePerth Amboy kwaye ungumnini weshishini ogqibe kwelokuba acele umngeni kuSodolophu wase-Wilda Diaz.
Ngaba iNew Jersey's Gun Law Banning-High-Capacity Magazines iyakufikelela kwiNkundla ePhakamileyo yase-US?
INkundla yeziBheno yesiThathu yesibheno yaxhasa ukuvalwa kweNew Jersey kumaphephancwadi anamandla aphezulu kwiveki ephelileyo. Inqanaba ngoku limiselwe ukuvavanya ukuba ingaba iNkundla ePhakamileyo yase-United States, kunye nelungu layo elitsha u-Justice Brett Kavanaugh, bazakuyijonga eli tyala.
Isindululo sikaSweeney 'njengemovie embi eyoyikisayo', utshilo uBucco
I-TRENTON-KwiNdibano yeNdibano u-Anthony Bucco (R-25), inkomfa yabezindaba izolo eTrenton ibifana nokubukela 'imovie embi eyoyikisayo.'
Akukho nyuso mncinci ka-2016 ku-N.J.
ISebe lezeMicimbi yaBasebenzi noPhuhliso lwaBasebenzi libhengeze ngoMvulo ukuba akukho lonyuso lwemivuzo iphantsi ngo-2016 luya kwenzeka eNew Jersey.
Iinkcukacha zokungeniswa kwemephu yokugqibela ye-GOP
Iimephu zokugqibela zebandla zingenisiwe kwaye inkqubo yokumiswa ngokutsha kwebandla ngoku yehlela kwilungu le-13 uJohn Farmer Jr. Umthombo onolwazi ngeziphakamiso zokugqibela ezivela kwiqela ngalinye uthi icala ngalinye lilwela isithili esidibeneyo esiza kubandakanya iinxalenye zeli 5 langoku i ...
I-59% yabantu baseNew Jersey bathi uChristie ngekhe enze umongameli olungileyo
Njengoko u-Gqirha uChris Christie elungiselela u-2016 ukubaleka kuka-Mongameli phakathi kokuhla kwamanqanaba ekhaya, i-59 pesenti yabavoti base-New Jersey bathi ngekhe enze umongameli olungileyo, ngokwe-Rutgers-Eagleton Poll yanamhlanje. Iipesenti ezingama-34 kuphela ezikholelwa ukuba uChristie uza kwenza kakuhle kwiOval Office.
I-Monmouth Poll: UClinton une-57% yenkxaso phakathi kweDems
Ngaphandle kweeveki ezininzi zeendaba ezimbi, ukuma kukaHillary Clinton phakathi kwabavoti beDemokhrasi kwilizwe lonke kuhlala bomelele emva kokubamba umsitho wokuqala omkhulu wephulo lakhe kule mpelaveki. I-Poll yeYunivesithi yaseMonmouth yakutshanje ifumanise ukuba ngaphezulu kwe-3-in-4 yeedemokhrasi zinoluvo oluhle ngalowo wayesakuba nguNobhala Welizwe. Bambalwa abavoti abavakalelwa kukuba yonke indawo ineflethi yokuphumelela i-White House ngo-Novemba ka-2016.
UPhil Murphy utyikitye imiThetho yokuNyusa uMvuzo ngeejaji, ngamaGosa eKhabhinethi
Umthetho osayilwayo uza kunika amagosa ekhabhinethi yirhuluneli-angakhange anyuswe ukusukela ngo-2002- ukunyusa umvuzo wama- $ 34,000, ukusuka kwi- $ 141,000 ukuya kwi- $ 175,000.
UDade Susie uthengisa oonokrwece baselwandle kuLwandle: Akunjalo kulula.
Masithi nje udade uSusie wayeza kuthengisa oonokrwece baselwandle-- eNew Jersey. Nantsi into anokuhamba ngayo kwi-State State, ukuthengisa iigobolondo zolwandle elunxwemeni lolwandle: Kuya kufuneka aqinisekise ukuba indawo yakhe kwidolophu yolwandle ibiyenzelwe ukuthengisa.
I-15 lamaGosa kaMasipala anempembelelo eNJ
I-PolitickerNJ ithathe isigqibo sokwenza umjikelo wamagosa anyuliweyo anempembelelo e-NJ angenazo iiofisi eTrenton okanye eWashington.
Uvoto lwe-FDU: UChristie wamkelwe ngumsebenzi 34%
Umphathi uChris Christie ujongene nelona zinga liphezulu lokuvunywa okoko wangena e-ofisini, kwaye amanani afanayo abonisa inkolelo phakathi kwabantu baseNew Jersey ukuba urhulumente ukhokelele kwicala elingelilo, ngokutsho kwale ntsasa yeYunivesithi yaseFairleigh Dickinson kwiPublicMind Poll.
Trump / Christie 2016? Ukusebenza kukaSekela Mongameli uChris Christie
Ukulinganiswa kwemvume yeRhuluneli yaseNew Jersey uChris Christie ngamaxesha onke kusezantsi kwilizwe lakhe.
I-New York Comic Con iya kwiMadison Square Garden
Ukuphefumlelwa okwenyani kukaJeremy Scott's Not-'Racist 'Adidas Sneakers: My Pet Monster
Kutheni le nto uHillary Clinton Inkxaso yomelele kangaka phakathi kweNJ Dems?
Intsimbi kaHarry vs igillette fusion
Ikhaya lobuntwana likajeffrey dahmer
ubhala njani umsebenzi ovuthuzayo
ngenene ukhangela inombolo yefowuni
Umartin luther ukumkani ryan uyagcuma